Dhalinyaro Soomaali Ah Lagana Soo Celiyay Xabsiyada Liibiya Oo La Gaadhsiiyay Magaalada Muqdisho – somalilandtoday.com
Dhalinyaro Soomaali Ah Lagana Soo Celiyay Xabsiyada Liibiya Oo La Gaadhsiiyay Magaalada Muqdisho
(SLT-Muqdisho)-Diyaarad siday 124 qof oo Dawladda Soomaaliya ay kasoo deysay Xabsiyadda dalka Liibiya ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaadhay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo isugu jira Rag iyo Dumar, waxaana Wajiyadooda ka muuqday dhibaatooyin ay kala kulmeen intii ay ku jireen xabsiyadda dalkaasi.
Waxaa Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dhalinyaradaasi kusoo dhaweeyey Wasiiro iyo Masuuliyiin kale oo ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah dhallinyaradda Mudada dheer ku xidhnaa Xabsiyadda Liibaya ee nasiibka uu yeeshey in Dawladda Soomaaliya ay Dalkooda dib ugu soo celiso ayaa ka hadlay Dareenkooda, iyaggoo soo dhaweeyey dadaalka Dawladda ay u gashay in laga soo saaro Xabsiyadaasi, isla markaana dib loogu soo celiyo dalkooda Hooyo.
Cabdiwaasac Jaamac Maxamuud oo ka mid ah maxabiistii horey looga soo daayay gacanta Magafeyaasha Arxanka darran, haatanna ka shaqeeya Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Dawladda Soomaaliya ay doorkeeda ka qaadatay siddii Dhallinyaradda dalka dibadiisa ku dhibaateysan dalkooda loogu soo celin lahaa.
Wasiirka Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo kamid ahaa Madaxdii soo dhaweysay Maxaabiista laga keenay Liibiya ayaa sheegay in dhallinyaradda looga baahanyahay in ay ka shaqeeyaan Horumarinta dalkooda.
Dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in boqolaal dhallinyaro ah ay ka soo deyso Dalalka Itoobiya, Indiya, Jaziiradda Siishelis iyo Liibiya.